LINGONBERRY: GURYAHA FAA'IIDO LEH IYO ISTICMAALKA BERRY IYO CALEEMAHA - SOOSAARKA DALAGGA
Waa maxay faa'iidooyinka iyo waxyeellada beedka
Cunto yaryar, midho-daray ah oo leh qadhaadh yar, oo leh faa'iidooyin waaweyn iyo gaar ahaan qadarin dadyowga gobollada waqooyiga - caato. Waxaa loo isticmaalaa daawo ahaan daawo kale, waxaa si weyn loo isticmaalaa kiknoolajiyada iyo karinta. Waxay muujinaysaa sifooyinka waxayna saameyneysaa ragga, haweenka iyo carruurta siyaabo kala duwan. Lingonberry waa bakeer leh waxyaabo aad u faa'iido leh, laakiin sidoo kale waxay leedahay qaar ka mid ah dabeecadaha. Wax dheeraad ah oo ku saabsan wax walba. Isku mid ahaanshaha: lingonberry, lingonberry.
Cowberry, saynis Tallaalka 'Vaccinium vitis' - idaea L. - dhirta caanaha Vaccinium, ee qoysaska heera. Xididdadeedu waxay u egtahay qulqulo, oo ay ka samaysan yihiin dhoobo dhuuban oo jajaban, walxaha macdanta leh ee lagu nadiifiyo iyo u gudbinta xididada. Caleemaha lafdhabarta, kor u kaca ilaa 15-20 cm.
Sida lingonberries, qoyska heather ayaa ka mid ah heeter caadi ah, Daurian rhododendron, azalea, dhirta strawberry, blueberry.
Caleemuhu waa yar yihiin, beddelaan, oo leh geeso cirif leh. Midabka caleemaha waa cagaar madow (qaybta hoose waxay leedahay hooskii iftiin), qaabka caleemuhu waxay u eg yihiin halbeeg. Cabbirka xaashida:
ee width ilaa 1.5 cm;
ilaa 3 cm dheer
Qaybta hoose ee buug-yarahaan waxaa ku yaala meel bannaan oo leh maaddada xuubka oo soo nuugaysa qoyaanka ka soo baxaya dusha sare ee caleen.
Wakhtiga ubaxu wuxuu bilaabmaa dhammaadka Maajo wuxuuna soconayaa ilaa 15 maalmood. Flowers bisexual on pedicels gaaban, koraan leh yareel ah 10-20 pcs. Inta lagu jiro ubax, burooyinkuna waxay leexiyaan, sidaas darteed ilaalinta manka ee ka soo qoyaan. Qaybta gudaha ee perianth waxay gaartaa dhererka 6.5 mm cad-casaan, jilicsan, oo leh afar maqaallo oo lakulmay. Calyx ee ubaxa waxay u qaybsan tahay afar xabbadood oo saddex geesood ah oo ah midab guduudan. Koobka waxaa ku yaal:
sideed stamens, ballaariyay fiilo timo;
hal pistil sare ah ubax kasta.
Berry wuxuu ku koraa kooxo cufan leh (laga bilaabo 2 illaa 9 gogo 'mid kasta), guduud casaan, wareegsan, oo badanaa lagu dhex oogi jiray ilaa 8 mm. Qaybta sare ee miro waxaa ku jira calyx qalalan. Bisaylkiisa Berry wuxuu dhacaa Agoosto-Sebtembar, laakiin waxay ku kala duwan yihiin caabbinta dhaxan ee caadiga ah.
Ma taqaanaa? Lingonberries aan caano lahayn ayaa la samayn karaa "la sameeyay" si uu u bislaado adigoo ku dhajinaya tufaax casaan ama yaanyo. Badeecadani waxay ku faaftaa qadar yar "gaasta" gaaska "gas", waxay u dhaqantaa sida kor u qaadista koriinka. Dhadhanka berry ah ee noocan oo kale ah ma kala duwan tahay dhadhanka ah ee berry ku bislaaday xaaladaha dabiiciga ah.
Seeds of berry ee midabka midab ah ee foomka semi--labka ah. Wuxuu jecel yahay inuu kobciyo kaymaha isku dhafan ama dhoobada (gaar ahaan taangiyada qallalan).
Qiimaha nafaqada iyo kalooriga
Berry Tani waxay ka mid tahay alaabta cuntada, qiimaha tamarta ayaa keli ah 46 kcal. Qiimaha nafaqada 100 g:
borotiinka - 0.7 g;
dufanka 0.5 g;
carbohydrates - 8.2 g
Lingonberry waxay ka kooban tahay biyaha oo ah 86%.
Qadar yar oo kalooriyeyaashu ma jebin doonaan cuntada, iyo walxaha firfircoon ee ka kooban qaybtooda waxay dardar-galinayaan dheef-shiid kiimikaad.
Sidaa darteed, waxay ka qayb qaadan kartaa miisaanka luminta.
Waa maxay lingonberries gaar ahaan faa'iido leh, sidaas darteed waa content sare ee qaybaha waxtar leh. Qaybteeda, waxay leedahay:
Qalab badan oo fitamiino iyo macaadin;
sonkorta (ilaha tamarta);
Arbutin, Lycopene iyo Zeaxanthin.
Waa muhiim! Arbutin wuxuu u dhaqmaa sida antiseptic ee nidaamka kaadi-mareenka, laakin qiyaas daawo aan sax ahayn, waxay u horseedi kartaa sumeyn daran. U qaado maraq la karsado iyo fusiyaal waa in la taxadaraa.
Waa maxay lingonberry faa'iido leh
Faa'iidooyinka lingonberry wuxuu keenaa dadka da 'kasta, laakiin dadka waayeelka ah ayaa si gaar ah faa'iido leh. Inkasta oo isticmaalka baahsan, waxay leedahay qaababka qaar ka mid ah garashada riwaayadaha, haweeneyda, ama canugga carruurta.
Sababtoo ah saameynta antiseptic iyo saamaynta duriinka, lingonberry waa qaybta ugu weyn ee daawooyinka badan ee daawada kale ee prostatit. In ay ka kooban waxay isticmaali kartaa dhammaan qaybaha geedka: caleemaha, caleemaha, berry.
Qanjirka 'prostate', linden, pear, dabayl madow, bocorka, yar yar, cawska, geedka, iyo yaryar.
Sidoo kale, dhakhaatiirta daawada kale ayaa sheegta in lingonberry uu saameyn wanaagsan ku yeesho libido lab ah wuxuuna kordhiyaa awoodda.
Siinayaa saameyn firfircoon ee lingonberry on hawsha taranka ee haweenka. Waxay ka caawisaa dib u soo celinta heerarka hormoonada waxayna caadiyan caadada bishiiba. Qoyaanka la kariyo ee ku salaysan waxay awood u leeyihiin yareynta xanuunka caadada, iyo decoctions ee caleemaha si firfircoon u joojiso dhiig-raacidda.
Waa muhiim! Sababtoo ah saameynta firfircoon ee ilmo-galeenka inta lagu guda jiro uurka, gawaarida caleemaha lingonberry waa mamnuuc.
Berry Lingonberry waa dukaanka macaamiisha firfircoon ee firfircoon waxayna awoodaan inay taageeraan "baaxad weyn" inta lagu jiro uurka. Morsy ka lingonberry ula tacaalida bararka, iyo fiitamiinada ku jira waxaa ku habboon nidaamka habdhiska iyo hagaajinta niyadda.
Baro faa'iidooyinka jirka haweenka ee noocan oo kale ah sida chokeberry, shadberry, strawberry, blackberry, cherry, currant cas, karamberriga, honeysuckle.
Berry wuxuu awoodaa inuu la qabsado cudurka dhiig-yaraaneed ee haweenka uurka leh sababtoo ah xaddi weyn oo birta ku jirta, calcium wuxuu ka kooban yahay qayb firfircoon oo ka mid ah habeynta saxda ah ee ilamaha mustaqbalka.
Muujinta caanaha ayaa ah in aysan keenin xasaasiyadaha xasaasiyadda ee carruurta, inkastoo midabkeeda hodanka ah. Waa amaan oo tiro yar ayaa loo oggol yahay in carruurta lures ah.
Muddada 1-2 sano aan ka badnayn 50 g oo caato ah maalintii ayaa la oggol yahay. Laakiin berry wuxuu leeyahay maqaar qaro weyn oo aan si sahlan loo nadiifin karin, waxaa haboon in u adeego caruurta sida cabitaannada, cabitaanada miro, quudin.
Sidoo kale waa daawo aad u fiican "daawo dhadhan fiican leh" muddada sii xumeynta cudurada dayrta-guga.
Sida loo isticmaalo sifooyinka lingonberries
Maraq iyo infusions of caleemaha lingonberry waxaa loo isticmaalaa cudurada sida:
Sidoo kale caawimaadkooda waxay ku daaweynayaan:
cudurka caadada ah.
Caleemaha lingonberry ayaa sidoo kale leh sifooyin caafimaad oo waxaa loo isticmaalaa sida duriinka, jeermis-dilaha iyo wakiilka choleretic.
Berry Lingonberry waxaa loo isticmaalaa:
gastritis oo leh acidit-ka yar ee caloosha;
Maaddaama ay ka kooban tahay manganese, maadada chromium iyo bakteeriyada, lingonberries waxay aad u faa'iido u tahay waayeelka. Jilaalka la'aanta kuwan jidhka ah ayaa keenaya cudurrada nidaamka wadnaha.
Waa muhiim! Lingonberry sida daaweynta dadweynaha waxaa loo isticmaali karaa daaweyn dheeraad ah ama caawimaad oo ay la socoto isticmaalka khasabka ah ee daawooyinka.
Biyaha qamriga waxaa loo isticmaalaa haddii ay dhacdo murugo ama kulaylka qorraxda.
In lingonberries yihiin faa'iido leh oo leh codsi ballaaran ee daawada dhaqameed:
Ma taqaanaa? Qaar ka mid ah walxaha ku jira caleemaha lingonberries, waxay nadiifin karaan oo ka saari karaan biraha culus jirka.
Caleemaha yar yar ayaa la gooyaa oo la qalajiyaa si ay u sameeyaan decoctions iyo infusions. Caleemaha waxaa la goostay muddo dheer ka hor ubax.
Decoction ah ee caleemaha waxaa loo diyaariyaa sidan:
4 qaado oo caleemo ah ku shub hal litir oo biyo ah karkaraya;
ku adkeyso 30 daqiiqo;
cadaadisaa maraq soo baxay.
Qaado 50 mg saddex jeer maalintii.
Maraqyada lagu afuufayo afka ayaa si isku mid ah loo diyaariyaa.
Decoction ah ee caleemaha lingonberry waxaa loo diyaariyaa sida ku qoran qoyan:
1.5 qaado oo caleemo ah ku shub 0.5 litir oo biyo ah karkaraya;
kuleylka kuleylka ugu yar 30 daqiiqo;
maadaama uu dareeruhu hoos u dhaco, ku dar biyo la kariyey si uu u soo celiyo mugga asalka ah.
Qaado 1 koob oo maraq ah 2-3 jeer maalintii nus saac ka hor cuntada.
Shaah caleenta la kariyey ayaa leh waxyaabo faa'iido leh. Si aad u sameyso:
2 tsp. caleemo ku shub 1 koob oo biyo karkaraya;
ku adkeyso 10 daqiiqo darmuuska.
Isticmaal halkii aad ku heli lahayd qiyaasta qadada ee shaaha iyadoo lagu darayo malab.
Marka ay sariirta ku dhexjiraan carruurta, dhakhaatiirtu waxay ku talinayaan habkani inuu wax cuno lingonberries:
isku daraan 200 g oo ah caleemo iyo berry of lingonberry;
ku shub isku dar ah ee litir oo biyo karkaraya;
karkari ugu yaraan 10 daqiiqo;
adkee maraq iyo qabow.
Kala badhkii maraq-soo-saarka ayaa la qaadaa maalinta oo idil, qaybta labaad ayaa isla markiiba la qaataa ka hor wakhtiga jiifka.
Waa muhiim! Laguma talin in la dhigo shahwadahan muddo ka badan laba maalmood.
Waxaad ka iibsan kartaa caleemaha lingonberry ee farmashiyaha qiimo aad u macquul ah, ama adigu waad nadiifin kartaa naftaada. Si arrintan loo sameeyo, dhalinyaro, laakiin caleemo qallafsan ayaa jebiya (ka hor ama ka dib ubax) oo qalaji heerkul ah 30 ° -40 ° C hoosteeda hoosteeda, ama adigoo isticmaalaya qalajiyaha qalajiyaha cuntada. Waa suurtagal in la kaydiyo walxo cayriin sida mugdi ah iyo meel hawo wanaagsan leh ilaa 3 sano. Xilliga la ururiyey oo si habboon loo qalajiyey caleemaha waxay ku hayaan midabka cagaaran.
Berry Fresh, dhulka leh sonkorta, qaab casiir ah ama cabitaanada miro ayaa si siman waxtar leh.
cowsberries washed waxaa lagu daboolay sonkorta iyo bidix si ay u istaagaan saacado yar oo ka fiirsato juice;
juice la soo xulay waxaa lagu shubay suxuuno kala gaar ah oo meel dhigan;
isbeddel soo dhalaalay ayaa la shubay biyo waxaana la karkariyey kuleylka hooseeya 20 daqiiqo;
maraq soo go'ay waa la gooyaa oo isku qasan juuska bidixda.
Si kor loogu qaado waxtarka iyo qiimaha nafaqada ee casiirka miraha waxaad ku dari kartaa malab inuu dhadhamo.
Ma taqaanaa? Juices iyo cabitaanada miro laga diyaariyey berry ee lingonberry, waxay hoos u dhigi kartaa cadaadiska dhiigga.
Biyaha lingonberry waxaa lagu helaa qooyaha berry ku jira, iyada oo la isticmaalayo calool jilciye.
Qalabka qurxinta alaabta guriga lagu isticmaalo ee loo isticmaalo qaababkan:
decoctions caleemaha waa weyn sida tonic ah wajiga. Iyada oo ay ku xiran tahay hoygeeda antiseptic, waxay ku haboon tahay maqaarka dhibaatada leh noocyo kala duwan oo cuncun leh;
decoctions caleemaha ayaa faa'iido leh si loo tirtiro qandhada iyo ka hortagga timo lumis;
Berry oo la jajabiyey ee lingonberry waa firfircoon ka kooban halabuurka waji kala duwan. Sababtoo ah maaddooyinka sare ee asiidhyada dabiiciga ah ee ay ka kooban tahay waxay ka caawisaa sidii looxin lahaa laalaabkii wanaagsanaa.
Lingonberry waxaa loo adeegsadaa karinta. Berry ee geedi socodka ee karinta iyo kululaynta daaweynta ma lumiso dhadhan. In lagu kariyo, waxaa la mariyey, kvass, laakiin waa midka ugu caansan foomka macaanka ama macaanka.
Ma taqaanaa? Macaanka Cowberry waa macmacaan dhaqameed caadiya oo ku yaal wadamada Scandinavian.
Waxaa sidoo kale inta badan lagu daraa sida buuxinta nacnacyada, kaabayaasha waxaa la diyaariyaa, cabitaanka khamriga waxaa lagu saleynayaa saldhigiisa.
Si fiican uhorow harraad iyo wakhti dheer ku haynta cusub, cabitaanada miro waxay diyaarisay asaaskiisa ama cabitaanada miro.
Intaa waxaa dheer in macmacaanka, lingonberries loo isticmaalo marinades kala duwan ee hilibka.
Sababtoo ah content sare ee ay ka kooban tahay walxaha firfircoon, marka lagu daro hantida daawooyinka, lingonberry leeyahay qaar ka mid ah ka hortagga isticmaalka:
Feejignaanta sare ee asiidhyada kiimikada ah ayaa ka hortagaya cudurrada mareenka caloosha iyo mindhicirada: boogaha, gasrasiyada oo leh kiimiko sare;
waxyaabaha ku jira tiro badan oo tannins ah ayaa ka hortagaya cudurrada kelyaha: fashil la'aanta kelyaha;
awoodda si aad ah u yareeya cadaadiska ayaa ka horjoogsanaya dadka qaba cududda qalafsan;
dulqaad la'aanta jidhka maadooyinka qaarkood ee ka kooban qaybta lingonberries ama dareen-celin xasaasiyad leh iyaga.
Waa muhiim! Berry wuxuu awoodaa inuu ku ururiyo walxaha walxaha shucaaca, sidaas darteed waa in loo ururiyaa sida ugu fog ee laga helo jidadka ama dhirta kiimikada iyo kiimikada.
Lingonberry waa miro duurjoogta duurjoogta ah, faa'iidooyinkeeda waa lama huraan. Berry waa la badbaadin karaa si loo daaweeyo cuduro badan. Waa waxtar u leh dadka da 'walba, gaar ahaan dadka waayeelka ah, iyo sidoo kale kuwa qaba daal joogta ah. Waxaa la goosanayaa siyaabo kala duwan oo loo kariyo, iyo daawada dhammaan qaybaha warshadda leh saameyn faa'iido leh oo jirka ah ayaa loo isticmaalaa. Laakiin marka si khaldan loo isticmaalo, lingonberry, marka lagu daro faa'iidadiisa, waxay keeni kartaa dhaawac aan loo baahnayn oo caafimaadka jirka ah.
Si loo baabi'iyo cawaaqib aan loo baahnayn, waa lagama maarmaan in lingonberries loo isticmaalo tiro xadidan ah, ha ilaawin inaad la tashato dhakhtarkaaga kahor inta suurtagal ah isticmaalka ammaankeeda.